प्रदेश नं ५ को समुन्नत बिकासको लागि हाम्रो पहल :प्रवाक्त अकरम ।। – Waikhari
गृहपृष्ठ विविध प्रदेश नं ५ को समुन्नत बिकासको लागि हाम्रो पहल :प्रवाक्त अकरम ।।
प्रदेश नं ५ को समुन्नत बिकासको लागि हाम्रो पहल :प्रवाक्त अकरम ।।
अकरम पठान अहिले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका एक उदाउदा नेताको रुपमा परिचित भएका छन । सलिन अनी भद्र स्वाभावका अकरम अहिले तराई मधेश र पहाडको विकासका लागि अहोरात्र खटेका छन । कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा घर भएका अकरमलाई पाटीले समेत विश्वास गरी महत्वपुर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । उनी अहीले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेश नं ५ का प्रवक्ता हुन । समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेश नं ५ का प्रवक्ता अकरम पठान विगत दुई दशक देखी नेपाली राजनितिमा सक्रिय हुनुन्छ । अकरम पठानले गरेको राजनितिक सर्घषका बारेमा सनिउल्ला धोबीले गरेको कुराकानी ।
१) अकरम जी तपाईको पाटीले संविधानको विरोध किन गर्नुभएको हो ?
सर्व प्रथम त प्रश्नाको लागि धन्याबाद दिन चाहान्छु । हेर्नुस संविधान कुनै व्याक्ति वा कुनै पाटीले ल्याएको होइन । संविधान एक लिखित दस्तावेज हो । लिखित दस्तावेज समय अनुसार परिर्वतन गर्नु पर्छ । यो संविधान संशोधनको पक्षमा हामी उभिएका छौ । अहिले सरकारले संविधान संशोधन गर्न आश्वासन समेत दिएको छ । हामीले संविधानको विरोध भन्दा संशोधन गर्न सरकरालाई दवाव दिएका छौ यसरी बुझ्नुस । मधेश र मधेशीको बालिदानबाट प्राप्त उपलब्धी हासिल गर्नका लागि हामी हरपल लागि पारेका छौ । हाम्रो पाटीको केन्द्रिय रुलिगं अनुसार संविधान जारी भएको असोज ३ गतेलाई हामीले विरोधको रुपमा मनाएका छौ । संविधान ल्याउनमा सबै नेपालीले अहम भुमीका खेलेको तपाईलाई थाहै छ ।
२) अनी किन मन्त्री पद खाएको त ?
हेर्नुस बाच्चा जब सम्म रुदैन तब सम्म दुध खाना पाउदैन । बाच्चालाई दुध खाने अधिकार हो तर उ दुख खानाका लागि रुनु पर्छ । त्यसैले हामीले सरकार बाहीरा बसेर धेरै सर्घष गर्यौ । सरकारले हाम्रो कुनै सुनुवाई गरेन । त्यसैले मधेश अन्दोलनलाई सार्थक बनाउनाका लागि पाटी अध्यक्षको नेतृत्वमा हामी मधेशी सगै सम्पुर्ण नेपालीको उन्मुक्तीको लागि सरकारमा गएका हौ ।
३) कपिलवस्तु सहित देशै भरी भएको मधेश अन्दोलनको समयमा तपाई अग्रपंक्तीमा उभिएर अन्दोलन गर्नु भयो के उपलब्धी पाउनु भयो ?
हो म कपिलवस्तुमा आफ्नो पाटीको अन्दोलनको अगुवाई गरेको थिए । अन्दोलनमा यस क्षेत्रका सांसद अभिषेक प्रताप शाहको पनि महत्वपुर्ण सहभागिता रहेको थियो । उहा अहिले नेपाली काग्रेसमा गइसक्नु भएको छ । त्यस्तै मगंल गुप्ता चाचा, अन्य पाटीका नेता कार्यकर्ताहरुको योगदानले यो अन्दोलन हामीले गरेका थियौ । यो अन्दोलन मेरो मात्र अन्दोलन होइन यो अन्दोलनले सबैको साथ र सहकार्यले सम्भाव भएको हो । पहिचान, संघीयता र समानुपातिक समावेशीकरण सहितको अधिकार सम्पन्न स्वायत प्रदेश निर्माणको लागि मधेश अन्दोलन भएको तपाईहरुलाई थाहै होला । विगतमा भएका अन्दोलन मधेशी आदीवासी जनजाती, थारु, महिला, दलित, मुस्लीम, पिछाडवर्गको उत्थानको लागि भएको एक ऐतिहासिक अन्दोलन हो । अन्दोलनको उपलब्धी नै हो की आज नेपालीहरु आफ्नो शिर उच्च गरेर हिडना पाएका छन ।
४) तपाई संघीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेश नं ५ को प्रवक्ता हुनुन्छ प्रदेश विकासको लागि के पहल गरको छ तपाईको पाटीले ?
हेर्नुस हामीले फ्रि मा आफ्नो प्रचार गर्न चाहेका छैनौ जे गर्छौ जनतालाई छर्लगं थाहा छ । हाम्रो पाटीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री र सचिव मोहम्मद इतियाक राइनले शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालि रहनु भएको छ । प्रदेशको विकासका लागि विभिन्न गतिविधी गरीरहेको यहालाई अवगत नै छ होला । अहीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको सुधार एक उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ । कसैले नगर्ने कार्य हाम्रो पाटीका नेताहरुले गरि रहेका छन । हाम्रो प्रदेशमा १२ वटा जिल्ला छन सबै जिल्ला अस्पातालको अवास्था एकदमै सुधार भएको छ । औषधीको आभाव हुन दिएको छैनौ । विभिन्न खाले रोगको निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नु भएको । प्रत्येक क्षेत्रमा २५ शैयाको अस्पाताल निर्माण कार्य गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । सनि जी हाम्रो पाटीको विरोध मात्र भएको छ हामीले धेरै नै काम गरेका छौ अहिले । यस्तै शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इतियाक राइनले हरेक स्थानिय तहामा सोच भन्दा राम्रो योजनाका साथ काम गरिरहनु भएकै छ । यहाले ग्रामिण क्षेत्रको विकासका लागि शहरी विकास मन्त्रालयबाट एक मुष्ट निर्माणको कार्य प्ररम्भ गर्नु भएकै छ । हरेक नगरपालिका गाउपालिकामा शहरी विकास मन्त्रालयको भवन विकास शाखाले प्रोफाइल निर्माण कार्य गरी रहेको छ ।
५) अकरक जी तपाई प्रदेश प्रवक्ता हुनुन्छ कपिलवस्तु विकासको लागि के छ तपाईको एजेण्डा ?
सनी जि कपिलवस्तुका मेरो जन्म भुमी हो । मैले कपिलवस्तु सगै यस प्रदेशको १२ वाटै जिल्लाको विकासको गती अघी बढाएको छु । यहाको समुन्त विकासका लागि मैले धेरै नै योजना बनाएको छु । अब यहाको विकासको योजनाले गती लिनेछ छ ।
६) योजना मात्र बनाएर भएन ?
सुन्नुस हाम्रो एजेण्डा भनेको हिमाल पहाड र तराईलाई समृद्ध बनाउने हो । हामीले अहिले पाटीको सिद्धान्तलाई भवानात्मक एकतासग जोडेर विकासको लहर चलाएका छौ र सफल पनि भएका छौ । पहाडमा भित्रि पहाड लोकमार्ग त्यसै गरी सबै वडा वडाका मोटरबाटो पुर्याउनको लागि हाम्रो पाटीले विशेष काम गरी रहेको छ । त्यस्तै तराईमा पनि विशेष काम गरीरहेको छ । तराईमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भौतिक सरंचना निर्माण, सडक बाटो बत्ती लगायतका क्षेत्रमा तिब्र गतीले काम भैइ नै रहेको छ । अहिले स्थानिय तहले समेत विकासको पक्षमा रहेको छ । कपिलवस्तुको हकमा हुलाकी रोड, सुराही सिचाई योजना, बाणगंगा सिचाई योजना, कृषि खेती योग्य जमीनको एकीकरण, बल्क निर्माण, कृष्णनगर भन्सार नाका विस्तार, मार्यादपुर नाका प्रवाहन सम्झौता, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अस्पाताल निर्माण, कृषिको लागि सहुलियत मल वितरणको कार्य मेरो र मेरो पाटीलको पहलले गरिरहेका छौ ।
अन्त्यमा तपाईलाई धन्यावाद सनि जी अमुल्य समय दिनु भयो । केही प्रश्न सोध्नु भयो । राजनितिक मुल्य मन्यतालाई आत्मासात गर्दै आइरहेको एक सर्घषशिल नेता हु एक दिन पक्कै पनि यहाको सर्वपक्षिय विकास हुन्छु भनेर लागेको छु । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पाटी समग्र नेपाल विकासको एजेण्डा बोकेको पाटी हो यस्को सिद्धान्तले नै नेपालको सर्वपक्षिय विकास हुन्छ । हाम्रो पाटीले पाएको दुई स्वास्थ्य मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत मैले प्रदेश नं ५ को लागि विशेष योजना योजना ल्याएको छु । अन्त्यमा तपाईलाई फेरी पनि धन्यावाद ।